March 2020 – TPEC
Waxaa wali xarunta dhexe ee Guddiga KMG doorashooyinka Puntland Maalintii u danbaysay si habsami leh uga socda diiwaan galinta ururada siyaasadda ee doonaya inay ka qayb galaan tartanka doorasho qof iyo cod ah, oo ka qabsoonta dowladaha hoose ee Puntland.Diiwaan galinta oo soo bilaamatay 15 DEC 2020 ayaa saacado uun ka dhimanyihiin waqtiguu xirmi lahaa …
Sawirkii 15- diiwaangalinta urarada siyaasada Puntland. Read More »
Sawirkii 14- diiwaangalinta urarada siyaasada Puntland. Read More »
Sawirkii 13- diiwaangalinta urarada siyaasada Puntland. Read More »
Waxaa xarunta dhexe ee Guddiga KMG doorashooyinka PuntlandMaalintii u danbaysay ka socda diiwaan galinta ururada siyaasadda ee doonaya inay ka qayb galaan tartanka doorasho qof iyo cod ah, oo ka qabsoonta dowladaha hoose ee Puntland.Diiwaan galinta oo soo bilaamatay 15 DEC 2020 ayaa saacado uun ka dhimanyihiin waqtiguu xirmi lahaa oo ah 05:00 Galabnimo. Fg:- …
Sawirkii 12- diiwaangalinta urarada siyaasada Puntland. Read More »